I-Lollipop ifaka umshini wokupheka uswidi | I-yinrich
Iselula | WhatsApp | Wechat: +8613801127507, +8613507, +86139559666088 Imenyu: Sales@yinrich.com info@yinrich.com
Umugqa Wokukhiqiza weLollipop
I-flat lollipop edalayo yokufa nokugoqa umshini
I-lollipop die-ukwakha umugqa
I-Jelly Candy Production Line
Ulayini we-Jelly Candy wokufaka
Uhlafuna ulayini & Bubble Gum ulayini
Uhlobo lwe-Pillew Think Chewting Gum ulayini
Uhlobo olungenalutho lwe-Bubble Gum ulayini
Umugqa wokubumba ushokoledi
Umshini weSandwich (Cookie Capper)
Umugqa Wokukhiqiza UCandy
Umugqa we-hard uswidi wokufaka
Umugqa we-hard uswidi wokufa
Uhlelo oluzenzakalelayo lwe-Auto-Weic (AWS)
I-Flash Chamber Cooker (FCC)
I-Cook Fing Cooker (BM)
I-Cooker eqhubekayo ye-jelly / marshmallow (CJC)
I-Cooling Belt (SCB)
I-Rotor Cooker (RT)
I-Universal Vacuum Cooker (TC)
Uhlelo Lokuqedwa Okusheshayo (RDS)
Iyunithi yokupheka ye-Batch-Happy (BJC)
Umshini wokugcwalisa we-biscuit
Umugqa Wokukhiqiza ama-Marshmallow
Umugqa we-marshmallow ulayini
Ukugcwaliswa kweMacaron kanye nomshini we-cap
Ulayini wokukhiqiza uCandy & Chewy Candy
Umugqa we-toffee ubeka umugqa
Chewy uswidi ukusika kanye nomshini wokusonga
Umugqa othambile we-candy wafa
Umugqa wokukhiqiza we-lentil
Umshini wokupakisha uswidi
Insiza ngemuva kokuthengisa& Incwadi yokufakazela
Ikhaya > Imikhiqizo > Umugqa Wokukhiqiza weLollipop > Umugqa we-lollipop
Le khasiumugqa we-lollipop yimishini ethuthukisiwe yokukhiqiza ama-lollipops. Umshini we-Lollipop osebenzayo we-Lollipop Depositing Lollip i-Lollipop Candy Ukwenza idivaysi ehlangene engakwazi ukukhiqiza ngokuqhubekayo amaswidi anzima nama-lollipops ngaphansi kwezimo eziqinile zokuhlanzeka.
I-Yinrich ingumkhiqizi we-lollipop ochwepheshe. Umugqa wethu wokufaka imali ye-lollipop uhlome ngohlelo lwe-shs othomathikhi wokufaka ukunamathela. Lo mklamo omusha unesisindo esikhulu sokukhipha nokunemba okuphezulu. Yilesi simo esenza umugqa we-lollipop wokufaka imali ekhiqizwe yi-yinrich ethengisa kahle emakethe. Ngaphezu kwalokho, sineqembu eliqeqeshiwe lamathalente nensizakalo ephelele yokuthengisa ukulwela izidingo zomkhiqizo zamakhasimende ahlukene.
ulayini wokufaka i-lollipop
Uchungechunge lwe-YINRICH's GDL lwenzelwe ukwenza ama-lollipops afakiwe, umthamo kusuka ku-120kgs / h kuze kufike ku-500kgs / h. Amapaneli wokuthinta we-HMI wokusebenza okulula; Amaphampu wokulinganisa ngomjovo othomathikhi wemibala, ukunambitheka nama-asidi; Imigqa emibili enemigqa emibili, ulayini ophindwe kabili, ukugcwaliswa okumaphakathi, ne-lollipop ecacile ingenziwa kulayini. Ukufakwa okuqhutshwa yi-servo kulawulwa uhlelo lwe-PLC. Uhlelo lokufaka induku oluzenzakalelayo luyatholakala.
I-GD50 umthamo omncane we-lollipop
Umugqa wokuFungulwa kwebhola LollipopKungenza izinhlobo zezinhlobo ze-Candy Shapes, singenza ukwakheka okusha kobunjwa.Lo mshini ungenza uswidi onzima, i-lollipop, jelly, i-toffee, 4 kulayini ongu-1.Ukuphuma: 50-120kg ngehora
Ulayini wokufaka i-Windmill lollipop
Ividiyo ikhombisa ifayili le-umugqa wokufaka imali we-lollipop eyenziwe nguYinrich. Lo mugqa wokukhiqiza ungasetshenziselwa ukukhiqiza ngokuqhubekayo amaswidi amaningi aqinile, ama-lollipops e-windmill, njll ngaphansi kwezimo zenhlanzeko kakhulu. Ngalesi simiso sendlela yokufaka umoya we-lollipop, awukwazi ukukhiqiza kuphela amaswidi asezingeni eliphakeme, kepha futhi ugcine namandla nezikhala.Izici:1. Umthamo wokukhiqiza we-windmill lollipop deposits line ungafika ku-100-150kgs / h;2.Injection online, metering kanye ne-pre-ukuxuba ubuchwepheshe bokungeza uketshezi ngokulingana;3. Lo mugqa wokufaka umoya we-lollipop unamaphampu wamamitha ama-2 wokujova umbala, ukunambitheka ne-asidi;4. Lo mugqa wemvula we-windmill lollipop ungakhiqiza "umugqa wemibala emibili", "u-lollipops" obala, njll.5. Isikhunta esihlukile singenziwa ngokuya ngamasampula amaswidi ahlinzekwa ngamakhasimende.UYinrich uchwephesheumenzi wemishini yama-confectionery, ukuhlinzeka amakhasimende nge-confectionery, ukucubungula ushokoledi nemishini yokupakisha. Ulayini wokufaka i-Windmill lollipop ungomunye wabo, okukuvumela ukuthi uqhubeke ukhiqize amaswidi ahlukahlukene aqinile namalollipops ngaphansi kwezimo eziqinile zenhlanzeko.
I-Lollipop ifaka umugqa ngohlobo lwe-SHS lokufaka othomathikhi. Idizayini entsha ifaka amandla okuphuma aphezulu futhi inembe kakhudlwana ngokubekwa kwezinti. Ivumela ukulawula okuphelele kuyo yonke inqubo, ngezinga eliphakeme kakhulu lokusebenza.
GDL150 Whistle lollipop imali umugqa
GDL150 ikhwela lollipop
ulayini wokufaka i-lollipop ngohlelo oluzenzakalelayo lokufaka induku
I-lollipop depositing line nge-othomathikhi elula yokufaka induku